GMDQ Somalia oo ka qeybgalay shirka Guddiyada Doorashooyinka Carabta – GMDQ
GMDQ Somalia oo ka qeybgalay shirka Guddiyada Doorashooyinka Carabta
Wafdi ka socda Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) ayaa gaaray magaalada Jordan 02-02-2019, wafdigaan ay horkacayso guddoomiyaha guddiga Marwo Xaliima ayaa wuxuu ujeedkiisu yahay ka qayb gal Shirwaynaha sedexaad golaha guud ee Guddiyada Doorashooyinka Carabta ee sanadkiiba mar lagu qabto wadanka Jordan.
Shirkan gudihiisa ayaa waxaa loo tartamay ka mid noqoshada xubnaha Guddiga Fulinta ee Ururka Guddiyada Doorashooyinka Carbeed ee xubinta ka yahay GMDQ Somalia, taasoo ku guuleystay xubin ka mid ah GMDQ Md. Xusseen Cabdi Adam.
Shirkaan sanad laha ah ayaa waxaa ka qayb gala GMDQ tan iyo markii la aasaasay, hadana waxaa usoo hoyatay guusha ka mid noqoshada guddiga fulinta ee ururka Guddiyada Doorashooyinka Carbeed ee uu Xubinta ka yahay.
GMDQ ayaa ka qayb gala shirar caalami ah ee isagu yimaadaan dhigooda guddiyada doorashooyinka caalamka, isla markaana ay xubbin ka yihiin iyagoo ku matala qaranka Soomaliya, una muujiyo caalamka muhiimada doorashooyinka Soomaliya iyo heerka ay ka joogto dimuqraadiyada, iyadoo 2020 ay ka qabsoomi doonto codeyn guud ama “universal suffrage”.
Waxaa la faafiyey February 4, 2019 February 4, 2019